सरकारको काम: हतारको निर्णय, फुर्सदमा पछुतो! | नेपाली पब्लिक सरकारको काम: हतारको निर्णय, फुर्सदमा पछुतो! | नेपाली पब्लिक
होमपेज / राजनीति |
सरकारको काम: हतारको निर्णय, फुर्सदमा पछुतो!
नेपाली पब्लिक २०७६, २७ असार शुक्रबार १५:१४
– श्रीविलास दाहाल
नेपालका अहिलेका नेताको पुरानो बानी सुध्रिएको छैन। त्यो के भने हतार हतारमा निर्णय गर्ने, समस्यालाई पन्छाउने, ढाकछोप गर्ने अनि जब त्यही समस्या फैलिएर समस्या पर्छ अनि मात्र फुर्सद भएको बेला पछुताउने। राष्ट्रिय समस्याका विषयमा अथवा नीतिका विषयमा भए मात्र हुन्थ्यो तर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि यस्तै समस्या देखिए।
यो विषयलाई पुष्टि गर्न केही तथ्य त प्रस्तुत गर्नैपर्ला। विज्ञान र रसायन अथवा गणितजस्ता राजनीतिक तथ्य हुँदैनन्। राजनीतिक पार्टी अथवा सरकारले गर्ने निर्णय र उसका नीतिले देश र विदेशमा कस्तो तरंग र विवेचना ल्याउँछ, त्यही नै हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले संसदमा विधेयक पेश गर्‍यो। त्यो सरकारको काम पनि हो। शासन सञ्चालन गर्न कानून चाहिन्छ। सर्वसत्तावादी राणा शासन र सक्रिय राजतन्त्रजस्तो अहिलेको सत्ता होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी पुगेका छौँ। संविधानको मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन र संविधानको शपथ लिएर सरकार चलाउनु पर्छ। विधिको शासन चलाउन त कानून चहियो। विधेयक चाहिन्छ तर प्राथमिकता चैँ के हो?
संघीयताका लागि चाहिने कति विधेयक एक वर्षभित्रै पास गरिसक्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले गरेन। जनताले चासो राखेका र पुराना समस्या हल गर्नुपर्ने, बालुवाटारको जमिनको समस्या हल गर्नुपर्ने त्यो प्राथमिकतामा परेन। एकैचोटि प्रेस, गुठी र मानवअधिकारतिर सरकार झम्टियो।
प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्नेहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार भएको भए पारदर्शी ढंगले सर्वप्रथम प्रेसमा चर्चा ल्याउनुपर्थ्यो। त्यसपछि माथिल्लो वा तल्लो, जुनमा पेस गर्नु परे पनि भयो। संसदमा फेस गर्न त्यति गारो हुने थिएन। लाजै मर्नु भयो।
क्षेत्रीय तहका विषयमा पनि नेपाल सरकारको ठूलो फजिती भएकै हो। नेपाल पहिलेदेखि नै असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हो। यो कुरा अहिले आएर उपप्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री बोल्न थालेका छन्। त्यतिखेर उनी कहाँ थिए? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका उपप्रधानमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग देश र विदेशका राम्रा कुरा पनि भन्न र बोल्न डराउने, यो कस्तो लोकतन्त्र? कत्रो तानाशाही?
नेपाल सार्क र बिमस्टेकको अध्यक्ष। सम्मेलन त सम्पन्न भयो। बिमस्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकालाई स्थानान्तरण शान्तिपूर्वक नेपालले गर्‍यो। यो राम्रो कुरा हो। तर, बिमस्टेकमा नेपालले हास्यास्पद नीति लियो। सचिव, त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री अनि सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षसम्म पुग्ने विषय एकैचोटि कसरी माथि पुगेर मोदीले प्रस्ताव गरे। बिमस्टेकका अध्यक्षका नाताले ओलीलाई रोक्नुपर्छ भनेर हाम्रा परराष्ट्र सचिव र मन्त्रीले किन भन्न सकेनन्?
कस्तो विडम्बना, भारतीय सैनिक भर्तिकेन्द्रमा नेपाली भर्ती रोक्नुपर्छ। यस्ता क्रान्तिकारी नारा लगाउने अतीतका कम्युनिष्ट नेता यहाँ कसरी चिप्लिए? भारत पूरा बिमस्टेक राष्ट्रलाई आफ्नो सैनिक छाताभित्र राख्ने प्रयासमा कसरी असफल भयो? यस्ता कुरा हेर्दा सानामसिना जस्ता लाग्छन् तर यिनै समस्याले पछि अप्ठेरो पार्छन्।
द्विपक्षीय आपसी सैनिक अभ्यास र तालिम तथा प्रशिक्षण नेपालमा भइरहेका छन्। बिमस्टेक राष्ट्रका सदस्यहरूसँग पनि यो अभ्यास गर्न सिकेको भए यत्रो विवाद आउने थिएन। बिमस्टेक सदस्य बर्माको स्थलसेना द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानसँग लडेकाले उसको परम्परा र दक्षता राम्रो छ। नेपाली सेनाले संसारभरि वीरता र नाम कमाए पनि, माओवादी जनयुद्धमा त अब्बल हुन सकेन। कतिपय अन्य कारण होलान्? सत्य त यही हो।
अहिले आएर नेपाललाई अमेरिकाको आग्रह मान्न कति अप्ठेरो परेको छ। ‘इन्डोप्यासिफिक सैनिक गठबन्धन’ अमेरिकाको रणनीति हो। चीनलाई खुसी पार्न अहिले नेपाल परापूर्वदेखि असंलग्न राष्ट्र हो। अमेरिका सैनिक गठबन्धनमा लाग्दैन भनिएको छ। तर, खम्पा विद्रोहको इतिहास त हामीसँग छ। अमेरिकाले अहिलेको ‘स्युचाटार’को विद्युत् प्राधिकरणको चौरमा त आफ्नो मिनी हेलिप्याड बनाएकै हो। त्यहाँबाट चीनको उत्तरी सीमासम्म अमेरिकी हतियार पुगेकै हुन्। अझै पनि कतै भण्डारण गरिएको हुनुपर्छ भन्ने पनि शंका छ।
बीआरआईबाट लिने लाभ नेपालले लिन सक्दैन भन्न नेपाललाई किन डर लाग्छ? यो त चीनको व्यापार नीति हो। चीनको पहलमा खडा गरिएको ‘एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक’बाट नेपालले ऋण लिन सक्छ। सायद नेपाल यसको चैँ सदस्य भइसकेको छ। चीनले अब नेपाललाई अनुदान र सहयोग दिनेवाला छैन। उसले दिने यसै बैंकबाट ऋण हो। यो एडीबी (एशियाली डेभलपमेन्ट बैंक)को काउन्टर हो।
नेपालले आफ्ना ऐतिहासिक र परम्परिक अडानलाई दरोसँग राख्नुपर्छ। भारत र चीनको त्यत्रो ठूलो लडाइँ भयो। लडाइँले उब्जाएका सीमा समस्या अझै हल भएका छैनन्। तर पनि भारतीय व्यापारीले चीनमा लगानी गरेकै छन्। स्वयं भारतले पनि ‘एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक’बाट ऋण लिएकै छ। नेपालको त तिब्बती शरणार्थी समस्या न हो।
भारतले अहिलेसम्म चीनको बीआरआई योजनालाई किन मानेको छैन? यो पाकिस्तानका कारणले हो। चीनले प्रस्तावित गरेको बेल्ट र रोड भारत र पाकिस्तानको विवादित सीमाबाट भएर जाने हो। यो सानो योजना हो र? हाम्रो मेची–काली राजमार्ग जस्तो हो र? प्रधानमन्त्री ओली त रोडमा साना हवाईजहाज उतार्ने भन्छन्। त्यो त चीन हो। चीनको ड्रागन डरलाग्दो छ।
भारतको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय नीति उदेकलाग्दो छ। जुन प्रधानमन्त्रीको सरकार बने पनि उसको परराष्ट्र नीति भारतका प्रथम मन्त्री जवाहरलाल नेहरुको मार्गमै चल्छ। त्यो नीति भनेको भारतको स्वार्थमा आधारित हो। सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नु। प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले अलिकति परिवर्तन गर्न खोजे तर प्रभावकारी भएनन्। छिमेकी ससाना राष्ट्रलाई हेपेर अप्ठेरो पारेर दोहन गर्ने नीति हो। सहयोग गरेर मन जित्ने, त्यसलाई ‘गुजराल डसक्ट्रन’ भनियो, अरूले त्यसलाई पछ्याएनन्।
मोदीको नीति त झन् अप्ठेरो छ। हिन्दूत्व देखाउने र सत्तामा पुग्ने रणनीति हो। उनी भारतलाई धनी बनाउन चाहन्छन्। त्यसका लागि चीनसँग आर्थिक सहकार्य। मालदिभ्समा गएर पाकिस्तानलार्ई हर्काछन्। आतंकवादलाई पैसा कहाँबाट आउँछ भन्छन्। नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउँछन्। सार्कलाई निष्क्रिय गराउँछन्। चीन र बर्मा सार्कको सदस्य हुन्छन् भन्ने उनलाई डर छ।
प्रधानमन्त्री ओली मुखले सबै ठीक पार्छन्। व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्छन्। भर्खरै उनको एउटा भनाइ आएको छ। परराष्ट्र मामिलामा सबैको राष्ट्रिय सहमति र समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ। यो समान दृष्टिकोण र सहमति बनाउने भनेको स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै हो। नेपालले राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सहअस्तित्व आजसम्म पनि मानिआएकै छ।
प्रधानमन्त्री ‘छाडा साँढे’ भएर जताततै दगुर्नु हुन्छ। जंगबहादुरको शैलीमा रेलमा लन्डन, पेरिस दैडिनु हुन्छ। कम्बोडियाबाट चैँ के सिकेर आउनु भयो? त्यहाँ राजतन्त्र फर्काएको छ। बुद्धधर्म राज्यले मानेको छ। सबै छन्। विपक्षी, संसद्, निर्वाचन तर लोकतन्त्र छैन। कि अब संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति भएर अनि जंगबहादुरले झैँ ‘बेबी किङ’ काखमा राखेर शासन गर्ने हो? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अघात हुने हतारमा अनेक बेतुकका निर्णय नगर्नुहोस्। हतारमा निर्णय गरेर फूर्सतमा नपछुताउनु होला।